MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA BEAGLE SHEPHERD DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Beagle Shepherd Dog
Beagle / German Shepherd Mixed Breed eyda
Chevy Adhijirka Beagle ee 7 bilood jira
Adhijirka Beagle ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Gorgor iyo Adhijirka Jarmalka . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
adhijirka reer Jarmal malaamute yeey qas
'Kani waa isku-darka adhijirka Beagle / Jarmalka, Diesel! Wuxuu ahaa eey ku jira sawirkan. Markii uu jiray 9 bilood iyo badh wuxuu miisaamay konton rodol da'daas oo istaagaya cagihiisa ayaa laabta iga saarnaa, laakiin waxaan ahay 5'1 oo kaliya markaa taasi wax badan ma dhahayo. Wuu ku fiican yahay carruurta iyo kuwa kale eeyaha , in kasta oo eey lab ah ka adagtahay isaga dumarka. Macluumaad badan kama heli karo iskudhafkan, laakiin isagu waa eey la yaab leh. Isagu waa macaan yahay, difaac badan yahayna! Isagu waa tababar fudud , laakiin wax badan ma qaban doono daaweyn la'aan wali. Aad ayuu u firfircoon yahay, laakiin wuu ciyaari doonaa ilaa inta uu ka daalayo, ka dib wuu seexan karaa weligiis. Isagu ma ooyo laakiin mar kasta oo dayax madoobaad ah, oo wuxuu umuuqdaa inuu qaadan doono ka dib Adhijirka Jarmalka inbadan, inkasta oo uu leeyahay dhagaha jilicsan ee jilicsan. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado inta uu le'eg yahay ee uu helayo, ma lihi wax aan ka badnayn lixdan rodol inkasta oo! '
Biskit ah GSD / Gorgor isku darka 2 sano jir— 'Biskit waa mid aad u eey firfircoon . Wax badan ayay ku dhex socotaa daaradda dambe sida iyadu weli ey u tahay. Waxay jeceshahay inay wax ku calaasho xitaa iyada iyada calalin alaabta lagu ciyaaro. Waxay ku wanaagsan tahay baaritaanka sanadlaha ah. Waxay dhoola cadeeya iyada oo ilkaheeda mararka qaarkood. Waa waxay u egtahay macno laakiin iyadu ma ahan. Iyadu ma jecla bisadaha . Iyadu ma jecla in la iskaga tago muddo dheer markiiba, taas oo lamid ah 2 saacadood. '
rottweiler puppy 2 bilood jir
iskudhafka bernard ee dane weyn